- व्यापार घाटा चुलिंदैः अर्थतन्त्र कसरी थेगिएला ?
व्यापार घाटा चुलिंदैः अर्थतन्त्र कसरी थेगिएला ?
काठमाडौंः राजनीतिक संक्रमण सिद्धिएर देश स्थायित्वतिर लाग्ने आशा गरिरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा भने लगातार बढिरहेको छ । यति मात्र होइन देशले प्राप्त गर्ने समग्र आय र समग्र निर्यातबीचको अन्तर (शोधनान्तर) घाटा पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थिति लगातार रहनु अर्थतन्त्रका लागि खतरा भएको विज्ञहरूले बताएको छन् ।
विगतमा नेपालको व्यापार घाटा नेपाली युवाले विदेशमा कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सले थाम्दै आएको थियो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको थिएन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ भने सोही अवधिमा व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर ८ खर्ब १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
। हुन त यो रेमिट्यान्स आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो तर लगातारको आयातमा भएको वृद्धिले गर्दा यसले व्यापार घाटा नथेग्ने अवस्था आएको हो । व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ प्रतिशतले बढी हो । देशमा भित्रिएको रमिट्यान्स आयभन्दा व्यापार घाटा २ खर्ब ७६ अर्बले बढी छ । यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलै चुनौती आएको पनि बताएका छन् ।
गत चैतसम्म ८ खर्ब ७६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरक वस्तु आयात भएक छन् । त्यस्तै ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यो वर्ष अलैंची, धागो, पोलिस्टर यार्न, अदुवा, तारलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ । जुस, जीआई पाइप, ऊनी गलैंचा, पस्मिनालगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, हटरोल सिटइन क्वाइललगायत वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । कृषि औजार तथा तिनका पार्टपुर्जा, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, सेनिटरी वेयर्स, सानो अलैंची, जिंक इनगोटलगायत वस्तुको आयात घटेको जनाइएको छ ।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा भारततर्फको निर्यात ६ दशमलव ९ प्रतिशत, चीनतर्फको ५८ दशमलव ९ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फको ७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार फागुनसम्म धेरै ठूलो रूपमा रहेको शोधनान्तर घाटा अर्थात् देशले प्राप्त गर्ने समग्र आयभन्दा बाहिर दिनुपर्ने व्यय चैतमा केही सुधार भए पनि १४ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भने सोही अवधिमा ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । आयातमा भएको उच्च वृद्धि, घट्दो रेमिटयान्स र विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिलगायत कारण गत फागुनमा शोधनान्तर स्थिति २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।
राष्ट्र बैकका अनुसार २०७३ पुसदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाताले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा चुनौती थपेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ९ महिनामा १० अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता गत चैतमा बढेर १ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात उल्लेख्य रहेकाले चालु खाता उच्च घाटा भएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मूल्यवृद्धि केही बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन । यो अवधिमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
लगातारको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढ्दै जानु र त्यसलाई थेग्ने स्रोत कमजोर हुँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि अप्ठ्यारो अवस्था हो । यसलाई लामो समय रहन दिनुहन्न । यसलाई नियन्त्रण गर्न र आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकलाई खल्बलिन नदिन राष्ट्र बैंकले  मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।